| PTFE ရေပိုက်အသုံးပြုမှုကဘာလဲ BESTEFLON
နိဒါန်း: Polytetrafluoroethylene (PTFE) ပိုက်သည်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်သောအလွန်စွယ်စုံသုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာငါးပိ extrusion နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု။ ထုတ်လုပ်သည်။ ငါးပိထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သော PTFE ပိုက်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။
PTFE အိမ်များနှင့်ရော်ဘာအိမ်များအကြားကွဲပြားမှု | BSETEFLON
သင်၏အင်ဂျင်သို့မဟုတ်လောင်စာဆီစနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သောအခါမည်သည့်ရေပိုက်အမျိုးအစားကိုသင်လိုအပ်သည်ကိုအတိအကျမသိရန်ခက်ခဲသည်။ စျေးကွက်တွင်များစွာသောရေပိုက်များရှိခြင်းကြောင့်သင်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သော application အတွက် PTFE hoses မှန်သောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ptfe ရေပိုက်ထုတ်လုပ်သူ ...
စက်မှုလုပ်ငန်းဗဟုသုတ E85 သို့မဟုတ်အီသနောသည်စီးပွားရေးနှင့်ထိရောက်သောလောင်စာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးလိုအပ်သောအိုကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အသုံးချနိုင်သောတောင်းဆိုမှုများအတွက်ပါဝါအလားအလာကိုပေးနိုင်သည်။ အနည်းဆုံး၎င်းသည်လေစားသုံးမှု၏ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အအေးသက်ရောက်နိုင်သည်။
သံမဏိ Braided PTFE Hose ဆိုတာဘာလဲ BSETEFLON
သံမဏိလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော PTFE Hose ဆိုသည်မှာ PTFE ရေပိုက်များသည်အစပိုင်းတွင်ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်အဆုတ်စနစ်များတွင်လည်းကောင်း၊ အာကာသကဏ္sectorတွင်လည်းကောင်းအသုံးပြုခဲ့ပြီးလျင်မြန်စွာလူကြိုက်များခဲ့သည်။ polytetrafluoroethylene ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေပိုက်များနှင့်ပြွန်များသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအောက်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်: PTFE convoluted hose (PTFE corrugated hose ဟုလည်းခေါ်သည်), အပြည့်အဝအမည် polytetrafluoroethylene ရေပိုက်သည် convoluted PTFE ပြွန်ကှနျ့နှင့်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆသံမဏိအပြင်ဘက်ကျစ်၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ပထဝီပုံသဏ္ofာန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်, ...
PTFE ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန် | BESTEFLON
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်သော PTFE ရေပိုက်များအသုံးပြုသောအခါမှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုကိုသေချာစေရန်သဟဇာတဖြစ်သော PTFE fittings များကိုအသုံးပြုရမည်။ ဒီဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို AN4, AN6, AN8, AN10, AN16, AN18 မော်ဒယ်တွေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ကားအရည်အားလုံးကို PTFE ပြန်သုံးလို့ရတဲ့အလှည့်အလှည့်အကွာအဝေးကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ် ...
အဘယ်ကြောင့်ပူစွန်းတိုင်အောင် ptfe ပြွန်ရှိသည်ပါဘူး BESTEFLON
3D Printer များသည် PTFE Tube များကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုကြသနည်းခေတ်သစ်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ 3D Printer များသည်လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံနည်းပညာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ထို့အပြင်ထပ်တိုးထုတ်လုပ်မှုဟုလည်းခေါ်သည်။ 3D ပရင်တာများပျက်ကွက်မှုနှုန်းနိမ့်သော်လည်း၊ အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးသည်နှင့်၊
ptfe ရေပိုက် assemb စုဝေးဖို့ဘယ်လို | BESTEFLON
သင့်အတွက်ရှင်းပြဖို့အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ptfe ရေပိုက်ထုတ်လုပ်သူက ptfe hose နဲ့ fittings installation ညွှန်ကြားချက်များ။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်အဆင့် ၁ - သင့် PTFE hose ကိုသင့်တော်သောအရှည်ကိုတိုင်းတာရန်၊ သင့်တွင်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးရောက်ရှိရန်အလုံအလောက်ရေပိုက်ရှိအောင်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
ptfe ရေပိုက်ကိုပြွန်နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံ။ | BESTEFLON
PTFE ဘရိတ်နှင့်လောင်စာဆီပိုက်တပ်ဆင်ပုံဤ“ မည်သို့” တွင် PTFE ရေပိုက်များနှင့် fittings အချို့ကိုမည်သို့ထားရမည်ကိုသင်ပြပါမည်။ ဤဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် brake fluid reservoir မှ hose ကို -4 သို့ AN / JIC သံမဏိပြုလုပ်ထားသောကြိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသုံးမည်။
ပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ptfe ရေပိုက်သို့မဟုတ် polyurethane ရေပိုက်ဖြစ်ပါတယ် | BESTEFLON
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော PTFE ပြွန်နှင့် PU ပြွန်နှစ်ခုလုံးကိုအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်၊ သို့သော်၎င်းနှစ်ခု၏အသုံးပြုမှုပတ် ၀ န်းကျင်သည်မတူညီပါ။ PTFE ပြွန်ကိုပိုမိုအစွမ်းထက်သောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုသည်။ အရွယ်အစားမှာလည်းအတော်အတန်ပြည့်စုံသည်။
ptfe ရေပိုက်တပ်ဆင်ပုံကို | BESTEFLON
ပူးတွဲ PTFE ပြွန်၏တပ်ဆင်ခြင်းကို PTFE assembly hose ဟုခေါ်သည်။ ဤ assembleose hose ကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀၀% စင်ကြယ်သော PTFE resin tube နှင့် 304 သို့မဟုတ် 316 သံမဏိထည်နှင့်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းမှုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ။
PTFE Tube ကိုဘယ်လိုချုံ့နည်း BESTEFLON
PTFE ပြွန်ကိုချုံ့ခြင်း၏အရေးကြီးသောအဆင့်များစွာအမှန်တကယ်ချုံ့ခြင်းနှင့်တူးခြင်းမပြုမီဤညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။ ပထမအဆင့်အနည်းငယ်မှလိုအပ်သောကိရိယာများကိုရှင်းပြပြီးအသေးစိတ်အတိအကျကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အဆင့် ၁ ကိရိယာများ ...
PTFE ပြွန်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ BESTEFLON
background、 စက်မှုလုပ်ငန်းနောက်ခံအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် PTFE ပြွန်များကိုပိုမိုမှီခိုအားထားနေရသောကြောင့် PTFE ပြွန်ပမာဏသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ PTFE ပြွန်များသည်စက်ရုံများနှင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်အသုံးများသောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအစားအစာ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းများတွင်အမြဲတမ်းတည်ရှိသည်။
Braided PTFE ရေပိုက်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည် | BESTEFLON
ချိတ်ဆက်ထားသော Stainless Braided PTFE ဘရိတ်ပိုက်နှင့် AN Hose နိဂုံးအဆင့် ၁ ဖြတ်ထားသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်မျှင်အမျှင်ကြိုးဖြင့်ဖိပါ။ ရေပိုက်ကိုထောင့်မှန်အတိုင်းဖြတ်တောက်ရန်ဖြတ်စက်သို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းသော hacksaw ကိုသုံးပါ။ တိပ်ခွေကိုဖယ်ရှားပြီးရှင်းလင်းပါ ...
PTFE ပြွန်ဆိုတာဘာလဲ BESTEFLON
အဲဒါကို ptfe tube လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲ။ အဲဒါကို ptfe ပြွန်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ Polytetrafluoroethylene ပြွန်ကို PTFE tube ဟုလည်းခေါ်သည်။ များသောအားဖြင့်“ ပလပ်စတစ်ဘုရင်” အဖြစ်လူသိများသည် tetrafluoroethylene ကို monomer တစ်ခုအနေဖြင့်ပိုလီမာခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောမြင့်မားသောမော်လီကျူးပေါ်လီမာဖြစ်သည်။ ဖယောင်းဖြူ၊
ဘယ်အရာက PTFE Braided Hose? BESTEFLON
PTFE တံဆိပ်ခတ်ထားသောပိုက်သည်သံမဏိရေပိုက်အတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့ဖြစ်ရာရေပိုက်၏သက်တမ်းသည်ရော်ဘာရေပိုက်သို့မဟုတ်သံမဏိပတ်ရစ်သည့်ရော်ဘာများထက်ပိုရှည်စေသည်။ ဒါဟာရော်ဘာထုတ်ကုန်ထက်အများကြီးအားသာချက်ရှိပါတယ်။ PTFE နိုင်လွန်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရေပိုက် - PTFE-помог ...
PTFE ရေပိုက်ပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲ BESTEFLON
material ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ၁ of Ptfe ပြွန်သည် polytetrafluoroethylene အတွက်အခြားအမည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အတိုကောက် PTFE (အများအားဖြင့်ပလပ်စတစ်ဘုရင်၊ ဟာရာဟုလူသိများသော) ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သည်၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပုံသေနည်းမှာ - (CF2-CF2) n - ။ Polytetrafluoroethylene ခဲ့ ...
PTFE TUBE ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း BESTEFLON
PTFE ပိုက်များအားဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကဘာလဲ။ 3D ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်းကပ်ထားသောဝိုင်ယာကြိုးကိုဖယ်ရှားပစ်နည်း။ 3D ပုံနှိပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာအမျှင်တွေက PTFE ပြွန်ထဲမှာကပ်နေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Bowden ပြွန်ရှိဝါယာကြိုးပြတ်တောက်လားသို့မဟုတ် PTFE ပြွန်တွင်းရှိအပြင်းဖျား၌ဖြစ်စေပိတ်ဆို့ထားသောအမျှင်ဖြစ်စေ၊
သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း PTFE ပြွန် | BESTEFLON
PTFE 3D ပရင်တာ၏ပြွန်သန့်ရှင်းရေးအကြောင်း PTFE 3D ပရင်တာ၏လည်ချောင်းထဲရှိကြီးမားသောစွမ်းရည်စီးရီးအမှုန်များသည်ဝိုင်ယာကြိုး၏ချောချောမွေ့မွေ့လှုပ်ရှားမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်၊ (သို့မဟုတ်) ကြိတ်ခွဲထားသောကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့် 3D ပရင်တာ ptfe ပြွန်၏ပြွန်ကိုရှင်းလင်းပါ။
Ptfe ပြွန်ဝယ်ရန်ဘယ်မှာ | BESTEFLON
ptfe tubing ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ Huizhou Zhongxin Besteflon Industrial Co, Ltd သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး PTFE ပြွန်ထုတ်လုပ်မှု D&R တွင်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်ပြီးအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ptfe စီတန်းရေပိုက်ကဘာလဲ | BESTEFLON
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း polytetrafluoroethylene (Teflon) သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်ရေနံဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် fouling နှင့် anti fouling ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, PTFE စီတန်းရေပိုက်လိုင်း welded သောအခါအောက်ပါပြwelနာများကိုအထူးအာရုံစိုက်သင့်တယ်, မဟုတ်ရင် ...
ပိုက်မပျက်စီးစေရန် PTFE ရေပိုက်ဖြတ်နည်း။ PTFE ပြွန်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်စက်ကိုဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကုသသည်။ ဖြတ်တောက်သောစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း PTFE ပြွန်သည်ပြွန်ပုံသဏ္effectivelyာန်ကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ရေပိုက်၏လက်ဖျားကိုထိုးခြင်းထက် ပို၍ နာကျင်စရာမရှိပါ။
ptfe ရေပိုက်ကဘာလဲ BESTEFLON
သင် PTFE ပစ္စည်းနှင့် PTFE ရေပိုက်အကြောင်းကြားဖူး? ကောင်းပြီ၊ မေးခွန်းအချို့ကိုဖြေနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ Polytetrafluoroethylene (polytetrafluoroethylene) ကို PTFE လို့အတိုချုံးထားပြီးပလပ်စတစ်ဘုရင်အဖြစ်လူသိများပြီးသူ့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနာမည်က Teflon ။ တရုတ်မှာတော့အသံထွက်ကြောင့်
PTFE စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် PTFE ပြွန်၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်ရမည်။ | BESTEFLON
Ptfe ပြွန်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော plunger extruder ပြွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သံမဏိပြွန်နှင့်ပလပ်စတစ်ပြွန်တို့ကိုအနီးကပ်ပေါင်းစပ်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ၁.၆ mpa ဖိအားနှင့် ၇၇ Kpa ဖိအားကိုခံနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် -60 ℃ ~ + 260 in တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
PTFE ပြွန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသုံးပြုမှုသည်အဘယ်နည်း BESTEFLON
သက်ရှိနှင့်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင် PTFE ပြွန်ကို ပို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာသည်။ အထူးသံမဏိတိုင်များ၏နယ်ပယ်များတွင်ရေပန်းစားသည်ကိုယခုအခါလူသိများသည်၊ teflon ထုတ်ကုန်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် USES စသည်တို့ဖြစ်သည်။ , ဒါ PT ...
PTFE အိမ်များနှင့်ရူဘယ်တို့အကြားကွဲပြားမှု ...
ptfe ရေပိုက်, Ptfe Tube 1.75, Ptfe ရေပိုက် E85, Ptfe ရေပိုက်ညီလာခံ 6an, ptfe ရေပိုက် braided, Convoluted Ptfe ရေပိုက် - 939 / 939b,